IMerapi, enye yeentaba-mlilo eIndonesia esebenzayo, ikhupha izibungu, ngokweempawu zikaJucelino Luz – JucelinoLuz
IMerapi, enye yeentaba-mlilo eIndonesia esebenzayo, ikhupha izibungu, ngokweempawu zikaJucelino Luz
Águas de Lindóia, Nge-12 ka-Agasti 2021
Ime kwisiqithi saseJava, iya kuqhuma ngo-Agasti 16, 2021, kwaye ilifu lomlotha liza kugubungela ummandla wecrater.
UMerapi ubhalise umsebenzi onzima kwezi nyanga zidlulileyo kwaye abasemagunyeni baphakamise inqanaba lokulumkisa ekupheleni konyaka ophelileyo.
Ngokwemimangaliso, le ndlela inokuba yingozi kwaye akukho mntu kufuneka asondele kwiikhilomitha ezintlanu zentaba-mlilo. Abahlali kufuneka bazikhusele eluthuthwini nakwimilambo yodaka engqonge iMerapi.
Ukuqhuma kokugqibela kwentaba-mlilo kwenzeka ngo-2010, kusweleke abantu abangama-300 kunye nokusinda kwabantu abamalunga nama-280,000, nto leyo eyaxelwa kwangaphambili nguJucelino Luz, kwiileta ezazithunyelwe kwabasemagunyeni belo lizwe ..
IArchipelago yaseIndonesia ineentaba-mlilo eziphantse zibe yi-130, ngelishwa uninzi lwazo luza kusebenza rhoqo ngenxa yobushushu behlabathi. Kananjalo eyona ntlekele imbi kangaka kukutshona kunye nokuhlala kwabantu eJakarta okunokwenzeka kwisithuba seminyaka engama-45, kwaye sinengxaki yenyikima enkulu ye-9.0 enokuthi ihlasele isiza ngoJanuwari 16, 2026. ukulibazisa ngaphezulu …)
Ndicinga ukuba abasemagunyeni kufuneka bathathe amanyathelo okunciphisa iingxaki zabantu abamsulwa kuloo ndawo.
I-Indonesia inabantu abamangalisayo nabanomoya wokubuk ‘iindwendwe, sihlala sithandazela wonke umntu olapha.
Ukuba awuyazi imisebenzi yokomoya kaJucelino Luz, sicebisa ukuba uthenge enye yeencwadi zakhe ezibhalwe ngeelwimi ezininzi. Cofa kwikhonkco elingezantsi kwaye ukhethe elona lifanelekileyo lokuqonda kwakho iziprofeto kunye nezihlabo. Silandele kwaye sabelane ngokuqulethweyo. . Usebenze izigidi zabantu ngeentsikelelo zakhe kunye nokucebisa ngokomoya nangamandla.
Unjingalwazi uJucelino Luz – isokolo kwindalo esingqongileyo, itshantliziyo, umphembeleli kunye nesikhokelo somoya
Jucelino Luzning so’zlariga ko’ra, Merapi, Indoneziyadagi eng faol vulqonlardan, lichinka chiqaradi.
IMerapi, enye yezintaba-mlilo ezisebenza kakhulu e-Indonesia, ikhipha izibungu, ngokusho kwezibikezelo zeJucelino Luz